Ny fampiharana ara-batana efatra tsara indrindra ho an'ny Android | Androidsis
Ny fampiharana tsara indrindra ho an'ny Android
Raha resaka endrika tsara dia ilaina ny sakafo ara-pahasalamana. Fa tena ilaina koa ny manao fanatanjahan-tena tsy tapaka. Koa satria ny fampihetseham-batana dia manampy antsika hanana toe-javatra tsara kokoa. Soa ihany, ny finday Android-tsika dia mety ho fanampiana lehibe rehefa mahazo endrika. Satria manana eo am-pelatananay ireo karazana fampiharana isan-karazany.
Ohatra, manana fampiharana ara-pahasalamana ho an'ny Android izahay. Misaotra azy ireo isika fa afaka mamorona fanazaran-tena fanazaran-tena izay hanampy antsika hanatsara ny endrika ara-batana. Vitantsika izany ho salama ary hanana vatana tsara kokoa.
Fampiharana ahafahanao mampiofana ao an-trano. Ka tsy isalasalana fa fomba tena tsotra hahazoana endrika. Ka ianao no manapa-kevitra hoe rahoviana no hampiofana. Zavatra iray ahazoana aina kokoa, satria amin'izay ianao mandamina ny tenanao tsara kokoa. Mila ny iray amin'ireo rindranasa ireo amin'ny findainao Android fotsiny ianao.
2 Nike Training Club: Fanatanjahan-tena sy programa
3 Fanamby ara-panatanjahantena 30 Andro
4 T. Fitness, Zatra & Gym
Manomboka amin'ny fampiharana ara-pahasalamana tanteraka izahay. Ny zavatra tsara indrindra momba ity rindranasa ity dia tsy ilaina ny mampiasa karazana fitaovana. Ka safidy mety indrindra hanaovana ireo fanazaran-tena ireo any an-trano. Zaraina amin'ny sokajy isan-karazany ny fampiharana, mba hahafahantsika mifandimby fahazarana hafa miankina amin'ny andro. Ho fanampin'ny fanitsiana bebe kokoa amin'ny ampahany amin'ny vatana izay tiantsika hafanaina. Misy fampiharana mihoatra ny 100 amin'ny fampiharana, izy rehetra miaraka amina video manazava. Ho fanampin'izay, afaka manamboatra fanao mahazatra isika. Tsara homarihina ihany koa fa misy sakafo azo alaina ao amin'ilay fangatahana.
Developer: Nexercise Inc.
Nike Training Club: Fanatanjahan-tena sy programa
Fampiharana fanatanjahan-tena tsara izay misy naoty tsara avy amin'ny mpampiasa. Ity fampiharana ity dia manolotra fanazaran-tena marobe azontsika atao hanatsarana ny toe-batantsika. ny ny fanazaran-tena dia mizara ho sokajy maro. Azontsika atao ny mifidy azy ireo mifototra amin'ny tanjontsika. Ho fanampin'izany, afaka manao ireo fanazaran-tena ireo isika samy ao an-trano sy any amin'ny gym mihitsy. Azontsika atao ny misafidy izay mety amintsika indrindra amin'ny fotoana rehetra. Ny fanazaran-tena rehetra dia nohazavaina tsara, mba ho mora ny fanarahana azy ireo.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Ho fanampin'izany, ao anatiny dia tsy mahita fividianana na dokam-barotra isan-karazany isika.
Nike Training Club: Fampiofanana an-trano
Fanamby ara-panatanjahantena 30 Andro
Mety ho ny fampiharana feno indrindra amin'ity sokajy ity ary iray amin'ireo fantatry ny mpampiasa indrindra. Fampiharana hanatanterahana izany fanamby mba ho salama ao anatin'ny 30 andro monja. Mahita fiofanana azonay atao avy any an-tranonay amin'ny fomba tsotra izahay. Misaotra azy ireo fa afaka manatsara tsara ny toe-batantsika isika. Ny fanazaran-tena rehetra amin'ny fampiharana dia hazavaina tsara ary misy horonan-tsary marobe. Ka afaka manao ny zava-drehetra ao an-trano isika tsy misy olana. Fampiharana mety raha mitady fanamby hahazo endrika ianao.
Maimaimpoana ny fampidinana ity app fampiharana ho an'ny Android ity. Na dia mahita mividy sy dokam-barotra ao anatiny aza izahay.
Fanatanjahan-tena ao an-trano - Mihena lanja ao anatin'ny 30 andro
T. Fitness, Zatra & Gym
Ity fampiharana ity dia safidy somary mandroso kokoa, natao ho an'ny olona efa manaraka io karazana fanatanjahan-tena io. Na dia safidy tsara aza izany raha manomboka amin'ny fahasalamana ianao. Hitantsika indray ny fanazaran-tena marobe izay azontsika atao. Azontsika atao ny mamoaka azy ireo na ao an-trano na any amin'ny gym, miankina amin'ny safidin'ny mpampiasa tsirairay. Misy maherin'ny 100 ny fanazaran-tena misy ao amin'ny fampiharana. Izy rehetra nanazava tamin'ny lahatsoratra, sary ary horonan-tsary. Ka tsy hanana olana ianao raha afaka manaraka azy ireo.
Maimaimpoana ny fampidinana ity app fampiharana ho an'ny Android ity. Na dia mahita mividy sy dokam-barotra ao anatiny aza izahay. Miaraka amin'izy ireo isika dia afaka mampiasa fanazaran-tena fanampiny sy asa fanampiny.
Total Fitness - Miofana any an-trano sy any amin'ny gym
Developer: Corner manga fitoviana tanteraka
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny fampiharana tsara indrindra ho an'ny Android
Samsung dia namoaka fanavaozana ny fiarovana voalohany ho an'ny Galaxy S9 sy S9 +
Ny sary tafaporitsaka an'ny Vivo V9 dia mampiseho fakan-tsary miverina roa sy efijery tsy misy sisin-tany